SHAX isku dhaf ah oo laga sameeyay Liverpool vs Chelsea ka hor kulankooda Final-ka UEFA Super Cup… (Yaa ku leh xiddigaha ugu badan?) – Gool FM
(Istanbul) 14 Agoosto 2019. Kooxaha reer England ee Liverpool iyo Chelsea ayaa laga sameeyey shax isku dhaf ah ka hor kulankooda ay wada ciyaarayaan caawa ee Final-ka UEFA Super Cup.
Liverpool iyo Chelsea ayaa isku qaban doona caawa garoonka Vodafone Park Magaalada Istanbul ee dalka Turkiga, halkaasoo ay kuwada dheeli doonaan koobka UEFA Super Cup.
Kooxaha Liverpool iyo Chelsea ayaa indhaha ku haya inay koox waliba koobkeedii ugu horreeyey xilli ciyaareedkan gacanta ku dhigto caawa.
Merseyside-ka kooxda ka dhisan kuwaasoo horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan ku furtay guul 4-1 oo ay ka gaareen naadiga Norwich City Jimcihii ayaa ku guuleystay koobka Champions League oo ay final-kiisii ku wajaheen naadiga Tottenham Hotspur.
Dhinaca kale Chelsea ayaa soo qaaday koobka Europa League kaddib markii ay garaaceen Arsenal, waxaana ay caawa Magaalada Istanbul kula ciyaarayaan Liverpool, inkastoo macallin Frank Lampard kooxdiisa ay la dhibtoonayso guuldarradii weynayd ee ka soo gaartay Axaddii naadiga Manchester United.
Liverpool ayaa koobkan ku guuleystay saddex jeer, waxaana markii ugu dambeysay ay qaaday sanadkii 2005, kaddib guushii caanka ahayd ee ay gaareen AC Milan, halka Chelsea ay ugu dambeysay koobkan inay qaado sanadkii 1998-kii, waana marka kaliya oo ay hanatay.
Yeelkeede, Blues ayaa ku dhammaysatay kaalinta labaad ama laga qaaday koobkan sanadihii 2012-kii iyo 2013-kii, kaddib 4-1 guuldarro oo ka soo gaartay Atletico Madrid, halka Bayern Munich ay rigooreyaal kaga qaaday 12 sano kaddib markaas.
Reds ayaana shaxdan isku dhafka ah xiddigaha ugu badan ku leh waxaana laga siiyay siddeed ciyaaryahan, halka Chelsea ay ku leedahay kaliya saddex ciyaaryahan.